Spice Archives - Mobiles Khabar
३० असार २०७२, बुधबार ०९:५४ Comments Off on स्पाइसको दुईवटा ट्याबलेट ‘एमअाइ-७१०’ तथा ‘एमअाइ-७३०’
काठमाडौं, ३० असार । भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी स्पाइसले नयाँ दुईवटा ट्याबलेट सार्वजनिक गरेको छ । स्पाइसले एमआइ ७१० तथा एमआई ७३० नामक दुईवटा ट्याबलेट सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका यी दुई ट्याबलेट अनलाइनमा मात्र सार्वजनिक भएका छन् । हालसम्म कम्पनीले यी ट्याबलेटका बारेमा कुनै आधिकारीक घोषणा गरेको छैन् । अनलाइनमा भएको लिष्टिंगअनुसार स्पाइसका दुबै ट्याबलेटमा ७ इन्चको स्क्रीन राखिएको ...
३१ जेष्ठ २०७२, आईतवार १०:३७ Comments Off on मोजिल्लाको स्मार्टफोन २४ सय रुपैंयामा नै !
काठमाडौं, ३१ जेठ । के तपाईँ २४ सय रुपैंयामा नै स्मार्टफोन किन्न पाईन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि ब्राण्डेड स्मार्टफोन करिब २४ सय रुपैंयामा किन्न पाईँदैन् । सामान्य किसिमको स्मार्टफोन खरिद गर्न पनि ५ हजार रुपैंया तिर्नुपर्दछ । तर अब केहि समयपछि तपाईँले २४ रुपैंयाको हाराहारीमा ब्राण्डेड स्मार्टफोन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । मोजिल्लाले भारतमा १५ सय भारतीय ...
७ बैशाख २०७२, सोमबार १२:४३ Comments Off on स्पाइस मोबाइलका थप मोडलहरु बजारमा आउँदै
काठमाडौं, ७ वैशाख । ज्योती ग्रूप अन्तरगतको स्टार्क टेक कम्पनीले स्पाइसका नयाँ मोडलहरु ल्याउने तयारी गरेको छ । केहि महिना अघि मात्र स्पाइस ब्राण्डको एन्ड्रोयड वानमा आधारित स्मार्टफोन स्मार्टफोन भित्र्याएको कम्पनीले केहि दिनभित्रै स्पाइसका थप नयाँ मोडलहरु भित्र्याउन लागेको हो । स्टार्क टेकले न्यून आय भएका तथा मध्यम वर्गका स्मार्टफोन खरिदकर्तालाई ध्यानमा राखेर फीचरफोनदेखि स्मार्टफोन रेन्जसम्मका फोनहरु ल्याउन लागेको जानकारी ...
२७ चैत्र २०७१, शुक्रबार ०९:४४ Comments Off on शुरुभयो सिटिसीमा मोबाइल बजार, बजार प्रबद्र्धन गर्न मोबाइल एक्स्पो
काठमाडौं, २७ चैत । सामसुङ ग्यालेक्सी जे १ मोबाइल एक्स्पो २०१५ आजदेखि शुरु भएको छ । सिटिसी मलमा अवस्थित सिटिसी मोबाइल बजारको ग्राण्ड ओपनिङ्ग तथा नयाँ बर्ष २०७२ को अवसर पार्दै सामसुङ ग्यालेक्सी जे १ मोबाइल एक्स्पो २०१५ शुरु गरिएको आयोजकहरुले बताएका छन् । उदघाटन समारोहमा सूचना तथा संचार मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले मोबाइलको बजार हरेक दिन बढ्दो क्रममा रहेको ...
४ फाल्गुन २०७१, सोमबार १०:०६ Comments Off on स्पाइस ड्रिम युएनओ भित्रियो, नेपालमा पहिलो पटक एन्ड्रोईड वान स्मार्टफोन सार्वजनिक
काठमाडौं, ४ फागुन । नेपालको लागि स्पाइस मोबाइलको एक मात्र अधिकृत बिक्रेतास्टार्क टेक कम्पनी प्रा.लिले नेपाली बजारमा पहिलो गुगल एन्ड्रोईड वान स्मार्टफोन ल्याएको छ । स्टार्क टेक कम्पनीका अध्यक्ष सौरभ ज्योती र प्रमुख ब्राण्डिङ्ग अधिकृत श्रीजना ज्योतीले संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रममा स्पाइसको ड्रिम युएनओ एमआई ४९८ मोडलको Spice Dream UNO Mi-498 एन्ड्रोईड वान स्मार्टफोन सार्वजनिक गरे । ज्योति समूहअन्तरगतको स्टार्क टेकले ...
७ पुष २०७१, सोमबार १३:१० Comments Off on गुगलले नेपालमा एन्ड्रोयड वन ब्राण्डका स्मार्टफोन ल्याउँदै
काठमाडौं, ७ पुस । भारतमा सन् २०१४को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको गुगलको ‘एन्ड्रोयड वन’ ब्राण्ड अब नेपालमा पनि आउने भएको छ । गुगलले यो वर्ष भारतमा पहिलो पटक एन्ड्रोयड वन ब्राण्ड सार्वजनिक गरेको थियो । एन्ड्रोयड वन ब्राण्डको निर्माता गुगलले अब यो ब्राण्डलाई नेपालमा पनि विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । गुगलले दक्षिण एशियाली मुलुकहरु नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि ...
२४ कार्तिक २०७१, सोमबार ११:३२ Comments Off on स्पाइसको आइफोन ६ जस्तो ‘एमआई ५४९’ स्मार्टफोन
काठमाडौं, २४ कात्तिक । विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको एप्पलको उत्पादन आइफोनको नक्कल विश्व बजारमा विभिन्न कम्पनीले गर्ने गर्दछन् । कुनै कम्पनीले भने आइफोन जस्तै देखिने उत्पादन बजारमा ल्याउने गरेका छन् । त्यहि सिलसिलामा भारतीय कम्पनी स्पाइसले ठूलो स्क्रीनसहितको ‘आइफोन ६’ जस्तै देखिने स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । स्पाइसले एमआई ५४९ लन्च गरेको छ । यो फोन १.३ जीएचजेड क्वाड ...
इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब भिडियो पनि अपलोड र शेयर गर्न गर्नुस् https://t.co/WiB8H8RIhy 20 hours ago